प्रदेश सांसदको निराशा - ‘हाम्रो त हैसियत नै भएन’
प्रदेश सांसदको निराशा – ‘हाम्रो त हैसियत नै भएन’
काठमाडौं – दाङका डिल्लीबहादुर चौधरी यसअघि दुईपटक सांसद भइसके । सांसदको भूमिका के हुन्छ भन्ने उनलाई राम्रै अनुभव छ । संविधानसभाका सभासद हुँदा उनले स्थानीयको मागअनुसार विकास बजेटसमेत जुटाए । यसपटक उनी प्रदेश सांसद छन् । तर खिन्न छन् । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ।
‘केन्द्रले कानुन बनाउने, स्थानीय तहले विकास गर्ने अनि हामी प्रदेशका सांसदले के गर्ने ?’ राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिन काठमाडौं आएका उनले आफ्नो भूमिकाप्रति नै प्रश्न गरे।
प्रकाशित : बुधबार, फागुन ३०, २०७४०८:०२
काँग्रेसभित्र शेरबहादुरलाई सिध्याउने खेलमा निधि, यसरी सुरु भयो हुँदैछ देउवाको पतन !
कस्तो बज्रपात ! बस दुर्घटनामा गुमाए छोराछोरीसहित पत्नी पनि
सुनकाण्डका अभियुक्तका नाटक
नेपाल र भारत सीमानाका अाधाजस्तो सीमास्तम्भ गायब
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा यी निकायबाट विनियोजित साढे २५ करोड रकम फिर्ता